Kutanga Nyowani nyowani kuMiddle East uye tsvaga basa kuDubai
Tanga Basa idzva kuMiddle East!
Mabasa muSaudi Arabia - Rondedzero yemakambani muKinguru Saudi Arabia
Tanga Basa idzva kuMiddle East
Kutanga Nyowani nyowani kuMiddle East. Vazhinji vako pamwe kutsvaga basa kuDubai. Iyo Middle East inopa akawanda ezvipo kune expats avo vari kutarisa Mafuta neGesi, IT, Sales, Marketing uye Hotel jobs opportunities muUnited Emirates. Pamusoro pe80 muzana vatsva vanotsvaka basa havana kuberekwa muEmirates. Vazhinji vava ndevaIndia uye vashanyi vePakistan mukati meAUE. Vanotanga basa idzva kuMiddle East kare kare.
Iwe haugone kuiswa chete nekuwedzera yako email pazasi. Unofanira kushanda zvakaringana kuti uwane basa. Saka iwe unofanirwa kusunga zvakaoma mazuva ese ekutsvaga basa kuMiddle East. Mhinduro chete ndeyokuti: Mari iripo. Iyo nzira yakanakisisa ndeyokusainira nekuwana basa nekambani yedu mu Dubai. Mazuva ano mutengesi unofanira kuzvibvunza iwe kana tende redu pamusoro nzira yekuwana basa muUAE.
Vazhinji vanotsvaga basa vanogona kuona kushambadzira nezve sei add yako CV yebasa. Saka tinoongorora nhoroondo yako nhasi, iwe unofanira chinyoresa uye uwane basa rako rokurota ne Dubai Dubai Company. Kambani yedu ikozvino ikozvino kubhadhara nzvimbo dzakasiyana-siyana kudarika United Arab Emirates neKatar. Zvisinei, tine zvikumbiro kubva kuSingapore, Australia, Canada uye New Zealand. Isu tinonyanya kugadzirisa nzvimbo dzepamusoro uye zvekutonga mu Dubai. Uye izvo zvinosanganisira kutengesa uye kutengesa, kutarisira kwekambani, IT uye engineering in Dubai. Tanga Basa idzva kuMiddle East.
Tsvaga Basa nekupera kwemwedzi
Ndapota onai email yako pasi apa uye isu tichaedza kukutsanangurira iwe pamagumo emwedzi kana neimwe nzira tarisa kune yedu yekupa chikamu chikamu webhusaiti. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutora tarisiro kune edu akasiyana mapakeji uye mabasa pawebhusaiti yedu kuti awone izvo zvinokodzera. Isu tine akawanda akavhurwa mabasa ekuvhurika mhiri kweAustralia, New Zealand, Canada uye United Arab Emirates.
Chinangwa chedu ndechokuti tive career solution yevatorwa vatsva muDaily City. Kutanga kudzinganisa rako rekurota basa uye ndokumbira kusaina neDubai City Company. Chikwata chedu chiri kutarisira kukubatanidza iwe nevamiriri vedu Dubai Company uye nekukuisa iwe muAFA. Dzvanya uye utevedzere kambani yedu profiles uye tumira kokero kukambani yedu. taura nesu zvakananga nhasi uye tarisa kuti ndezvipi zvatingakuitira iwe.
Hazvina mhosva kuti uri kupi kubva, tiri kubatsira pasi rese. Semuyenzaniso, vanhu vanobva kuPakistan vanokwanisa kutanga basa. Saka, muchokwadi, pasinei nokuti uri kupi, kambani yedu ichakwanisa kukubatsira kuwana basa muUnited Emirates. Panguva imwe chete, unogona kutsvaga kune dzimwe nyika. Imwe yemuenzaniso ndeye Qatar uye Saudi Arabia makambani ari kubhadhara.
Iwe Unoda kuwana Job mune Dubai Company tanga nevanotsvaka nyanzvi! Titi yedu inoshanda pane imwe sarudzo kuti ishande mikana inoshamisa yemabasa. Imwe yemabasa akanaka anopa isu isu tiri kupa kushambadzira basa basa nokuda kwevadzidzi vapedza kudzidza.
Chimwe chinhu chinokosha mubasa rako chinogona kutanga nhasi. Tsvaga kurota kwako basa in the Emirates. Uye zvechokwadi Tanga Basa idzva kuMiddle East. Nzvimbo dzaunofanira kutanga Ndiyo makambani ekubhadhara muGulf. The Careerjet mabasa muGulf region uye Pamusoro pewebsite yekutambira muGulf area. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Ne Dubai City Company iwe unogona Tanga Basa idzva kuMiddle East!.
Upload Resume Kukurumidza Kurukura Guta Pasi Pano! Tiri kubatsirawo Firipi anoendesa kuwana Jobs mu Dubai.
Makambani mu Dubai - Tanga basa idzva kuMiddle East
Dubai City Company yakagadzwa mu 2019. Asi tinofanira kuyeuka kuti kambani yedu yekushandira. Muzviitiko zvose, zuva rimwe nerimwe kuita mabasa ekutsvaga basa kwete zveDubai chete. Asiwo dzenyika dzeGCC. Kuti unongedze vatengi vedu vanobva kunopfuura nyika dze30. Dubai City Kambani inobatanidza basa rekutsvaga nyanzvi nevashandi. Kuisa imwezve nzira, timu yedu inopa basa rekutsvaga rubatsiro nerubatsiro rwematunhu ruzivo ruzivo muDubai.
Pasi pemamiriro ezvinhu aya, basa redu nderokuva sarudzo yekutanga yekutsanya-kutsva kubhadharwa uye kukora misika yemabasa yemukadzi. Mune tariro yokuti basa redu rokutsvaga basa rinoita vashandi vemunyika dzakawanda uye vatsva vatsva. Kazhinji kutaura kuti kuiswa mukana unoshamisa webasa mumuguta rinokurumidza kukura pasi pano. Kusvikira panguva ino, kune huwandu hwe1,000 yevanonyanya kuzivikanwa munyika uye makambani muDhailand.
MuDhaibha, unogona kuwana mari yakawanda yakabhadharwa muUAE. Unogona kutsvaga jobs in Porsche in Dubai. Kunewo makambani akawanda akashanda muDhaibha mu2018. Kuti tiise imwe nzira, tiri pano kuti tikubatsire kutanga basa muDhaibha. Kutarisa kune Tanga Basa idzva kuMiddle East ?. Isa Resume kune Emirates Airline kambani kana kambani yedu!
Chero bedzi makambani ese eDubai anoshanda mukati me yese 4 misika mikuru: Kuunganidza, Human Resources, Mabasa Ehurumende, Kutarisira Kwevashandi. Boka redu munguva pfupi inotevera richakwanisa kuti akuise Dubai. Pasina matambudziko, kunyanya muUAE. Uyezve imwe yenzira dzakaisvonaka dzekuwana basa ndeyekuti tsvaga kufamba-in mubvunzurudzo muUAE.
Paunoita tsvakurudzo yakanaka yebasa ku Dubai. Iwe unofanirwa zvechokwadi kufunga nezvazvo kudzidzisa mabasa muUAE. Aya mabasa ndiwo anokurumidza kuwana uye ari nyore kwazvo kupfuudza kubvunzana. Basa idzva kuMiddle East inogara yakavhurika kune vatorwa. Uyezve basa mu Abu Dhabi inzira yakangwara yekuita yakashomeka huwandu hwemari. Qatar ne Kuwait zvakare nzvimbo yakanaka yekuenda kubasa.
Kuenda kune imwe nzvimbo kuMiddle East kunowanzova basa rakaoma zvikuru. Kufamba kuDhailand sekutsvaga nguva dzose kutora nguva nekuedza. Hazvina mhosva kuti iwe uchaedza sei kuedza. Mamiriro acho akafanana kune nyika ipi neipi kuMiddle East. Tanga Basa idzva kuMiddle East nekushandisa kambani yedu.
Vanotsvaga sevashandi vatsva muUAE
Dubai City Company inopa nhengo dzayo mhepo isingagoneki job search information for Emirates. Kambani yedu yakasiyana nevamwe. Nekuti isu tiri kutumira izere neakasimba uye yekutanga yezvinyorwa. Kungoda kukubatsira tanga basa idzva. Job yekutsvaga chikuva inopa wepasi rese network mikana kune ese expat muDubai. Yedu system yakagadzirirwa kuvandudza vanotsvaga basa profiles. Kubatsira makambani kuwana mushandi mutsva. Uye ye inoshanda nebasa rekutsvagisa basa muDubai.
Vanoshanyira kubva kune dzimwe nyika vachiuya kuUnited Arab Emirates. Vakawanda vavo kushanyira UAE pakutsvaga basa uye pakupedzisira, chete 20% yevari kuwana basa. Saka, kana iwe uri mutsva expats vari kutsvaga kuiswa muDubai. Unofanira kushanda zvakapusa kuti uwane kune mapurojekiti matsva. Chikwata chedu chichiita kuti zvese zvikwanise expats vachivabatsira nekutsvaga basa. Expatriate Tanga Basa idzva kuMiddle East.
Dubai City Kambani ikozvino iri kushanda nesimba kuti iise yega yega mumiriri uyo watiri kuwana. Hazvina mhosva kuti ivo vanobva kuIndia kana kuSouth Africa. Management yedu inoshanda nemazvo pane wese anotsvaga basa. Boka redu reunyanzvi rakagadzirwa zvakare Dubai WhatsApp Groups. Uye sezviri chokwadi, izvi zvakabatsira kune vanotsvaka 20,000 basa muUAE.
Nemazano edu ekutsvaga basa ndeyechokwadi vauri mazano vadzidzisi
Tsigiro uye kushuma nekutsvaga kwako basa ndicho chinhu chikuru. Kambani yedu yaita nekudyidzana kudzidzisa mhiri dzakasiyana siyana misi. Nekuti Dubai ndiyo yakanakisa nzvimbo yebasa, kunyanya yekubuda. Zvakare, iwe unofanirwa kufunga basa mubhengi chikamu. Iyo ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekubuda vanhu vangade kuiswa muEmirates.
Pasina kunonoka, Dubai City Company yakabatsira kupfuura 150,000 + vanotsvaka basa munyika yose. Munguva iyi vamiriri vedu ve expat vanouya kusvika zvino kubva kunopfuura 70 nyika dzakasiyana. Mukupedzisira kuongorora, sangano redu rinokupa mikana yakasarudzika kushamwaridzana nevashandisi muUSA. Kunyanya kana iwe ukavaka yako nhoroondo basa uye kuwana ruzivo rwakakosha muchokwadi kungoisa muhoro wako.
Inofanira kuyeukwa kuti ine simba mafungiro vatungamiriri. Uye zvechokwadi, vanoita sarudzo uye vatengesi vemabhizimusi vanongotarisa chete kune vakanyanya kukwikwidza. Padivi rakanaka, iwe unogona kuva mwoyo weDubai City indasitiri. Kana iwe uine ruzivo rwakakwana mumusika wepasi rose. Iwe unogona zvechokwadi kuwana basa muUnited Arab Emirates. Semuenzaniso, vazhinji ve Vashandi vechiIndia vanofarira kushanda ku Dubai. Saka kana iwe uchibva kuIndia uchange uine mukana wakawanda wekushanda sekutsvaga. Tanga Basa idzva kuMiddle East uye Upload Resume.
Mahofisi Ekutora muUAE
Usapedza nguva yako kutumirazve rutsigiro rwako kune vasina kururama recruiters. Ingozvinyora iyo mazano ekutsvaga mazano muUAE. Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kuwana nzira yekutora mabasa eDubai. Uye tanga basa idzva kuMiddle East super nekukurumidza. Dubai Guta inzvimbo inoshamisa yekugara uye kushanda. Asi kuti uwane basa ipapo uye ugone kuraramisa hupenyu hwako. Iwe unofanirwa kuve wakangwara kwazvo pane chero kufamba. Unhu hwakawanda hunogombedzera kuti inokubatsira kuti iwe uite basa nderokudzoka kwako.
Mahofisi Ekutora muUAE kutarisa pamusoro pe500 CV's mazuva ese. Iyo yakawanda, pane yakaipa lehlakoreng rako, hausi wega usingashandi. Kupfuura 95% vanotsvaga mabasa vangada kutanga basa idzva muMiddle East ipapo ipapo. Wana Basa idzva kuMiddle East kubva kuIndia. Tanga Basa idzva kuMiddle East.
Kana izvo zvingave nyore nyore sezvazvinonzwika kuita. Isa pane iyo kambani yedu inobatsira kusvika uye kugadzirisa yega yega yekuchera vamiririri. Panguva imwecheteyo ive yako kunyatsoongorora. Nekuti uri tsvaka basa uye kumiririra mumiririri ndiye chete anogona kukubatsira iwe kuti uwane basa. Kune akawanda mawebasa maunokwanisa kuGoogle.
Kuti uise imwe nzira, inotora kumativi e-3 mwedzi chete kutumira CV yako. Uye imwe mwedzi ye3 inongotumira zvido zvako zvekushanda Companies in Dubai. Pane rimwe divi, recruiters tine mavheekeri e8-12 ekuisa nzvimbo. Zvisinei kune avo vanobvumirana munyika yose vanogona kutora kunyange yakareba.
Dubai mabasa Guides
Nzira yakanaka yeku kubata basa nekukurumidza kuri kushandisa edu Gulf mabasa madhairekitori. Iwe unogona kuwana basa rakanaka kwazvo chete nekushandisa kwedu WhatsApp mumapoka eDubai. Boka redu rekutungamira rakagadzira mapoka anoshamisa muDubai. Isu tiri kubatsira matsva matsva kuiswa muUnited Arab Emirates. Nyowani yekukumbira kukumbira ndeye inotumirwa zuva nezuva pane edu Dubai maereketa.
The Whatsapp Dubai boka rezvikwata zvinoshandiswa kune vatsva vanoita basa. Kunyanya kune vanhu vane ruzivo rwakanaka. Somuenzaniso, kana iwe uri ine MBA iwe unogona kuwana basa mu Dubai. Uine izvi mupfungwa, iwe unogona chaizvo kuiswa kune yakabhadharwa mabasa mabasa muDubai. Dubai Guta Kambani iri muchinyatso kunyatsoziva neyenzvimbo yeYouTube kubhizinesi. Kunyanya kana tiri kutaura nezve Middle East.
Kune rumwe rutivi, unogonawo kutarisa yedu WhatsApp for jobs chikamu. Uye kutumira Resume yako kune dzinoverengeka nyika pama Guides edu. Nekutarisa iro rese boka reWhatsapp rekutsvaga zvinodiwa. Iwe unogona kunyatsoona kuti ndiani anogona kubikwa uye ndiani asingakwanise. Tanga Basa idzva kuMiddle East nekambani yedu !.
Kutsvaga mabasa muDha Dubai nenzira yakachenjera
Imwe nzira yakanaka yekuenda tsvaga zviwanikwa mu Dubai. Kutumira rakawanda kunyorera kumakambani akati wandei. Semuenzaniso, iwe unogona kushandisa kutangazve basa rekuisa kuti uise International expats in Dubai City. Ikoko, muchokwadi, kune basa rakawanda kwazvo rinopa kune expats mu Middle East. Chikwata chedu chakasika mutungamiri wekutengesa yako profile mu Dubai. Kukurudzirwa ndicho chinhu chinoita kuti uwane basa muUAE.
Kune rumwe rutivi, the basa refoni kuitsvaga ichange iri pfungwa yakajeka yekugadzirisa nayo. Tiri kubatsirawo mabasa muDhaibha kuSouth African females muDha Dubai vanokoshesa rudzi urwu rwezvidzidzo.
Usamborega uye rombo rakanaka nebasa rako kutsvaga kuMiddle East!